မြန်မာ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်အတိုင်း ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်တည်ကြောင်း ပြင်သစ်သံရုံးထုတ်ပြန် - Update News
မြန်မာ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲရလာဒ်အတိုင်း ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်တည်ကြောင်း ပြင်သစ်သံရုံးထုတ်ပြန်
September 15, 2021 September 15, 2021 - by Best_admin
အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲတွင် ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည့် မြန်မာလူထု၏ ဆန္ဒမဲများနှင့်အတူ ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်တည်ကြောင်း ပြင်သစ်သံရုံးက သတင်းထုတ်ပြန်သည်။ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ပြင်သစ်သံရုံးက ထုတ်ပြန်ခြင်းဖြစ်သည်။
လူထု၏ပူးပေါင်းပါဝင်မှု၊ လူ့အခွင့်အရေးနှင့် လွတ်လပ်မှုမြှင့်တင်ရေး၊ လူသားနှင့်လူမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ကို အာမခံသော ဒီမိုကရေစီ၏ တန်ဖိုးများကိုထောက်ခံကြောင်း ထပ်မံအတည်ပြုရန် အခွင့်အလမ်းပင်ဖြစ်သည်ဟု ပြင်သစ်သံရုံးကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ဒီမိုကရေစီလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကိုလည်း တောင်းဆိုကြောင်း ၂၀၂၀ ခုနှစ်နို၀င်ဘာ (၈)ရက်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ၌ ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သော မြန်မာနိုင်ငံသားများ၏ဆန္ဒမဲများနှင့် ပြတ်ပြတ်သားသားရပ်တည်ကြောင်း ပြင်သစ်သံရုံးကဆိုသည်။
သို့သော် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကတော့ ၂၀၂၀ ရွေးကောကိပွဲတွင် မဲစာရင်းများဖောင်းပွ၍ မဲမသမာမှုများရှိသည်ဆိုကာ အကြောင်းပြ၍ အနိုင်ရပါတီအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က လွှတ်တော်ခေါ်မည့်နေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ နံနက်အာရုံဦးတွင် အာဏာသိမ်းလိုက်သည်။ မဲစာရင်းများပိုခြင်းက မဲရလာဒ်ကို မည်သို့ပုံစံသွင်းခဲ့သည်ဆိုခြင်းကိုတော့ သက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း အာဏာသိမ်းမှုကို ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြသူများကို အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့သည်။
အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့သည့္ ျမန္မာလူထု၏ ဆႏၵမဲမ်ားႏွင့္အတူ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သံ႐ုံးက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီေန႔တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံ႐ုံးက ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။
လူထု၏ပူးေပါင္းပါဝင္မႈ၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လြတ္လပ္မႈျမႇင့္တင္ေရး၊ လူသားႏွင့္လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔ကို အာမခံေသာ ဒီမိုကေရစီ၏ တန္ဖိုးမ်ားကိုေထာက္ခံေၾကာင္း ထပ္မံအတည္ျပဳရန္ အခြင့္အလမ္းပင္ျဖစ္သည္ဟု ျပင္သစ္သံ႐ုံးကဆိုသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ဒီမိုကေရစီလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိုလည္း ေတာင္းဆိုေၾကာင္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာ (၈)ရက္အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲ၌ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဆႏၵမဲမ်ားႏွင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားရပ္တည္ေၾကာင္း ျပင္သစ္သံ႐ုံးကဆိုသည္။
သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မႉးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္ကေတာ့ ၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာကိပြဲတြင္ မဲစာရင္းမ်ားေဖာင္းပြ၍ မဲမသမာမႈမ်ားရွိသည္ဆိုကာ အေၾကာင္းျပ၍ အႏိုင္ရပါတီအမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က လႊတ္ေတာ္ေခၚမည့္ေန႔ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္အာ႐ုံဦးတြင္ အာဏာသိမ္းလိုက္သည္။ မဲစာရင္းမ်ားပိုျခင္းက မဲရလာဒ္ကို မည္သို႔ပုံစံသြင္းခဲ့သည္ဆိုျခင္းကိုေတာ့ သက္ေသျပႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အာဏာသိမ္းမႈကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားကို အၾကမ္းဖက္ပစ္ခတ္ၿဖိဳခြင္းခဲ့သည္။
Previous Article တရုတ်နိုင်ငံမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက အနုပညာ တော်လှန်ရေးသမားများ
Next Article ရွှေရွှေရဲ့ပါးစပ်ဖွာမူ့ကြောင့် မရှိတဲ့အရှက်တွေ လုံးလုံးကွဲသွားတဲ့ အေးနေဝင်း
ချမ်းသာ ကြွယ်ဝနေသူတွေမှာ ဝင်ငွေရလမ်းကြောင်း ဘယ်နှစ်ခုရှိနေလဲ?
NLD ပါတီကိုဖျက်သိမ်းဖို့ ကော်မရှင်စုံညီအစည်းအဝေးနဲ့ဆုံးဖြတ်မယ်ဟုဆို
ခရမ်းမြို့ကင်းမွန်ခြုံကျေးရွာမှ စစ်ဗိုလ်တစ်ဦး သေနတ်ဖြင့် ၃ ချက်ပစ်သတ်ခံရ
ပညာရှင်တွေစိတ်ဝင်စားနေတဲ့ မွန်ပြည်နယ်က တွင်းပေါင်း(၁၀၀) သို့ သမိုင်းပျောက်နေသော တွင်း (၁၀၀) အကြောင်း
PDF မှာပါဝင်သည်ဟု ဆိုသည့် လူငယ်တစ်ဦးက NUG ကာကွယ်ရေး ဒုဝန်ကြီး ဓါတ်ပုံနေရာတွင် ဒေါ်ဇင်မာအောင်ကိုမှားယွင်းဖော်ပြ
အောင်လအန်ဆန်းကိုပထမပွဲတုန်းက၃မိနစ်နဲ့နိုင်ခဲ့သလို…. နောက်ပွဲမှာ ၂ မိနစ်နဲ့အနိုင်ယူပြမယ်လို့ပြောတဲ့ ဒီရိုင်ဒါ
ဝယ်တာဝိတ်ချန်ပီယံ Abbasov ၏ သတိပေးခြင်းကိုခံလိုက်ရတဲ့ အောင်လအန်ဆန်